Sakafo saka, Maile Ohye ary totohondry rajako | Martech Zone
Sakafo saka, Maile Ohye ary totohondrin'ny gidro
Alakamisy, Aogositra 23, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Vao nahazo ity mailaka ity:
Reko i Douglas niresaka tao amin'ny Blog Indiana momba ny fomba SEO maty ary ny teny lakile dia tsy dia manandanja loatra toy ny taloha. Ahoana no hataonao handresena lahatra tsara ny mpanjifa amin'izany? Ho liana amin'ny andraikinao.
Naoty: Na tsy izany aza ny teny lakile as zava-dehibe… mbola zava-dehibe ny fampiasana ny teny lakile mety. Mandany fotoana be amin'ny mpanjifanay amin'ny fikarohana ny teny lakile izahay. Ny slide izay nozaraiko tamin'ny mpanatrika mba hampisehoana fa tsy maintsy mampiasa teny lakile marina (sy tsipelina ianao) dia ny fivarotana saka mifanohitra amin'ny fiompiana saka. Ity dia fivarotana saka:
Mampahafantatra ny mpanjifa fa tsy ny fampiasana teny lakile manan-danja dia sarotra kokoa. Na dia manova hatrany aza ny motera fikarohana, dia miadana be ny mandray azy ireo ny orinasa. Ao anatin'ny sehatry ny SEO dia mijery tsara izahay ary mametraka fanovana eo noho eo mba hahafahan'ny mpanjifanay mampiasa sy mitady hijanona eo alohan'ny fifaninanana. Raha tsy mino anao ny mpanjifanao dia manome paikady roa aho.
Voalohany, makà torohevitra avy aminao Google. Maile Ohye dia mpitantana vokatra fikarohana ao amin'ny Google ary manondro ny lesoka mahazatra ataon'ny mpivarotra raha ny momba ny fanatsarana ny motera fikarohana. Ho hitanao izany teny fanalahidy tsy ao anaty resaka! Ny lesoka ataon'izy ireo dia ny tsy fisian'ny tolo-kevitra momba ny soatoavina, tsy misy fomba fizarana, ny fampiasana ny vahaolana, ny tsy firaharahiany ny fironana SEO sy ny famerenana miadana.
Okay… Google no nilaza an'io ary nolazainao izany, saingy mbola tsy mino izany ny mpanjifanao. Manaraka izany ny totohondry gidro manatona. A totohondry gidro dia fatotra manokana mifatotra amin'ny faran'ny tady. Ao amin'ny tafika an-dranomasina, rehefa ho tonga eo amin'ny vatofantsika ny sambo, dia hatsipinao any an-tanety ilay totohondry gidro rehefa misy misambotra azy ary misintona tady. Tamin'ny faran'io tady io dia ilay tady fiantsonana goavambe. Tsy afaka manipy ilay tady goavambe ianao, ka manomboka amin'ilay tady kely ianao. Atsipazo totohondry rajako ny mpanjifanao alohan'ny hanipazana azy ireo ny tady lehibe.
Mametraha fanandramana miaraka amin'izy ireo izay manatsara ny famoahana bilaogy 10 misy anao mampiasa teny lakile araka ny tokony ho izy. Mitadiava lahatsoratra 10 izay misy anao eo amin'ny laharana fa tsy tsara laharana ho an'ny teny lakile nomena. Hamafiso ny teny lakile, ampiasao ao anaty lohateny, tadiavo ny sary ahafahanao mampiasa azy ireo amin'ny mari-tsoratra hafa, alao antoka fa manana 3 ka hatramin'ny 4 voalaza ao anaty lahatsoratra ianao hanatsarana ny hakitroky ny teny lakile. Araho ny fotoana laninao amin'ny fanatsarana ireo lahatsoratra ireo, miandry 4 herinandro ary refesio ny valiny amin'ny analytics.
Mametraha andrana izay hanoratanao lahatsoratra bilaogy 10 vaovao izay manery. Mampiasà sary mahafinaritra - angamba sarin'ny mpanjifa na sary stock sasany izay tsara tarehy, manorata lohateny manintona ny olona hamaky bebe kokoa, ary manorata tantara momba ny mpanjifa na lahatsoratra torohevitra izay tena hanampy ny mpanjifanao. Tsy miraharaha ny fampiasana teny lakile… tsy miraharaha azy rehetra. Mizarà amin'ny Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, StumbleUpon ary amin'ny toerana hafa rehetra azonao atao ny asa. Mameleza resaka vitsivitsy. Araho ny fotoana laninao, andraso 4 herinandro ary refeso ny valiny amin'ny analytics.
Amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny mpanjifanao sy ny atiny fa tsy amin'ireo teny lakile, matoky aho fa ho hitanao fa ny safidy faharoa dia hihoatra ny safidy voalohany isaky ny mandeha. Tsy manoro hevitra an'iza na iza aho hitsahatra amin'ny fanatsarana, ny tiako holazaina dia rehefa mijanona tsy mifantoka amin'ny mekanika fanatsarana motera fikarohana ianao, fa kosa, ataovy anaty votoaty sy fampiroboroboana izany atiny lehibe izany - handresy ianao isaky ny mandeha!
Tsy mividy ny vokatrao sy ny serivisinao ny mpikaroka sy ny botika, hoy ny olona. Rehefa manova ny fombanao ianao raha miresaka amin'ny mpikapa mandry na bot, dia ho very mpanjifa ianao.
Tags: Keywordfampiasana teny lakilemaile ohyegidro totohondryfikarohana OptimizationSEO
Fifandraisana sy fahitana
Ny andraikitra vaovao an'ny Chief Technology Technology Officer